Compressors - Lolu imishini, esiklanyelwe cindezela emoyeni nokuthengisa izabelo kwalo okwalandela ngomfutho ophakeme. Lezi amadivayisi asetshenziselwa for ukusebenza imishini futhi amandla amathuluzi, kanye inqubo control. amayunithi ezinjalo kungase kudingeke hhayi kuphela ezimweni ukuphila, kodwa futhi emagalaji, kanye ukukhiqizwa izindawo, ngakho bathatha ezivame kangaka namuhla. Ezinye izinhlobonhlobo imishini futhi zonke ungasebenza kuphela ngenxa ingcindezi ukudedelwa emoyeni, ikhwalithi okuyinto ngezinye izikhathi kubaluleke kakhulu.
Lithengiswa namhlanje zingatholakala compressor ngoba igalaji anhlobonhlobo, ingasetshenziswa ukuze uxazulule izinkinga zansuku zonke noma ukusebenza ezindaweni zezimboni. Lokhu imishini ihlukile ilungiselelo yangaphakathi kanye nezici. Ngaphambi kokuthenga, udinga ukuqonda amamodeli ukucacisa imigomo. Kuze kube manje, futhi izinhlobo ezimbili zezinkantolo emoyeni compressors kungatholakala - piston futhi isikulufa.
Izici okukhethayo: isikulufa compressor
Uma udinga compressor egalaji, ungakwazi sinake Kuvunguza uhlobo imishini. Ngokuvamile, lezi amadivaysi ibuye isetshenziswe inhlangano amathuluzi kanye nezimoto, bathola isicelo waso ngokulandela okushiwo Woodworking amabhizinisi. Samandla egalaji uyasebenza isimiso okuyinto kanje: emoyeni lingena ngokusebenzisa valve ukuncela, futhi ngemva ngenxa injected isikulufa iyunithi is bahlanza ku isihlukanisi, futhi ngokusebenzisa kurediyetha ukupholisa ubabonisa olubonakalayo.
Kungani kufanele ukhethe compressor isikulufa
Izinzuzo esemqoka kule imishini ukuthi kungenzeka operation okuqhubekayo eside futhi umsindo ongaphakeme. Lezi amadivayisi ukonga kakhulu, umkhiqizo eliphezulu futhi kudle amandla kancane ziqhathaniswa piston.
Izici piston compressors
Uma udinga ikhaya compressor, kufanele ucabangele inketho ukuthengwa imodeli piston. It umoya onomfutho kuveza piston ukuthi isebenza reciprocating ukunyakaza. Lo msuka itholakala ngaphakathi izindlu. Ezimweni eziningi, lezi zinhlobo piston compressors isetshenziswa ngesikhathi esifanayo ne-ukuphila komoya-ibhulashi, for ukusebenza amathuluzi womoya kanye eziyihaba imoto amathayi.
Ukwahlukanisa reciprocating compressors
Piston compressor ngoba egalaji ihlukaniswe izinhlobo eziningana. Ngakho, amayunithi yilezi:
Lo mqeqeshi owake wapheka asetshenziswa ngokuhlanganyela amabhowudu futhi Pneumodrill. Ungancomi ukusetshenziswa kwabo ngokuhlanganyela spray izibhamu, ngenxa ingozi yokuhlanganisa upende namafutha. amadivaysi Uwoyela-khulula enze kube nokwenzeka ukuba athole eMhlanganweni ekhishwa umoya ohlanzekile, okuyinto elingenalo amanyela. Ngakho-ke, amadivayisi anjalo baye bathola isicelo sabo ububanzi. Kodwa yayinesithiyo esisodwa, okuyinto kuvezwa obala ukuphila inkonzo iDemo.
Incazelo ibhande onobuhle
Ziyisivikelo amadivayisi abe ukusebenza okuhle, okuhlala, kanye nokugcinwa lula. I compressor reciprocating abasebenzisi yasendlini kuyakhethwa ngenxa yokuthi leli thuluzi kuyinto compact, eziphansi, futhi lokhu inquma izinjongo zasekhaya. Njengoba kusimo main kuphuma ukuntula kwakhe ikhono ukusebenza ngokuqhubekayo. Njalo ngamaminithi angu-20, amadivayisi njenge kumele ivumele ukuba baphumule.
Ukukhethwa yasekhaya compressor ukusebenza
Ukukhethwa compressor lufanele lwenteke kulamazinga lalandzelako ngesisekelo ukusebenza. Lokhu kulinganisela kulinganiswa ngamalitha ngomzuzu. Bala lokhu ipharamitha kuyadingeka, unikezwa imishini okumele kusetshenziswe ndawonye. Kubalulekile ukutadisha izici lobuchwepheshe ngemodeli ngayinye kudivayisi, izibalo eligoqiwe okwagcina sizonikeza ukusebenza oyifunayo. Kodwa khumbula ukuthi compressor emoyeni akumelwe ukulayishwa ezingaphezu kuka-70% isibalo okukhulunywe ngumkhiqizi. Yingakho kungcono ukuba ukhethe imodeli ephethe namandla 200 l / iminithi ngaphezulu.
Njengoba isibonelo imishini ephethe namandla 260 l / imiz ungase ucabangele compressor PROFline MS 1800/50, ogama value kuyinto ruble 10 200. Lokhu piston kuyinto imishini yesimanje umsebenzi izinga kuleli zwe, ku workshop noma igalaji. Imodeli ihlinzeka esitebeleni amandla womoya uhlobo amathuluzi. Ukuze unciphise inani nowe ukusebenza kungaba amadivaysi ngokufaka efaka emoyeni onomfutho ku umamukeli. Icala ivikelwe kahle ngokumelene ukugqwala, ngoba ebusweni elingaphandle embozwe ungqimba zokuzivikela. Mobility kuqinisekiswa isibambo emzimbeni, okuyinto ikuvumela ukuba ushintshe isiqondiso ngesikhathi ukufuduka isayithi compressor.
Kukhethwa nemishini ingcindezi yokusebenza namandla
Ukukhethwa compressor kumele kwenziwe ngumthengi kakhudlwana futhi esekelwe ingcindezi yokusebenza. Kufanele acabangele izici amathuluzi asetshenziswe ndawonye. Ngokwesibonelo, i-spray ngezibhamu ingcindezi eyanele kule ezahlukene 4 ibha. Kodwa imishini womoya edingekayo 6.5 ibha. Uma uhlela ukusebenzisa compressor ukusebenza Tjhugulula isondo, uzodinga kwandise ingcindezi yokufuna ukuba 10 ibha. Industrial imishini, lokhu ipharamitha kufanele sifinyelele 16 ibha.
Excellent egalaji ofanele imodeli FUBAG EMOYENI MASTER Kit, obiza ruble 9800. Operating ingcindezi kule samuntu, imishini 8 ibha, futhi amandla 1.5 kW. Ngomzuzu owodwa, iyunithi okwaziyo ukukhulula 222 amalitha emoyeni. Izinga ubuncane umsindo sasikhipha kuyinto 85 dB. Samandla (220V) kumele zikhethwe futhi kucatshangelwa amandla ukuthi sizothinta ijubane. Njengoba kushiwo ngenhla, le ndlela kufanele kukhethwe ngemajini.
Isibonelo imishini ngamandla isilinganiso kungaba imodeli, "Calibre CB-1100m Master", obiza ruble 3,700. Amandla Phiko 1.1 kW, kuyinto 180 l / imiz, futhi imishini ukala 6 kg. Le divayisi uwoyela-free ingasetshenziswa ukusebenza kwamathuluzi womoya. imodeli ephathekayo singasetshenziswa emkhakheni wokwakha nokulungisa, kanye egalaji. Imishini has a intambo isitoreji, isibhamu kanye hose. Uma uyikha phezulu le engaphakathi ikhava has amathebhu ukugcina nezinamathiselo. Ikhebula Ubude ngempela umxhwele futhi 1.4 m, kodwa ubude tube 3 m.
Ukukhethwa by ivolumu umamukeli
Lapho abathengi cabanga umbuzo kanjani ukukhetha compressor ngoba egalaji, zinaka futhi yenqwaba owamukelayo. Kufanele kuqashelwe ukuthi idivayisi echazwe esihlokweni ukulethela ezithile emoyeni onomfutho, iqinisekisa compressor operation ingaphazanyiswa, ngisho noma esimweni lapho emoyeni onomfutho lehla esiphansi. iziphazamiso ezinjalo ngeke eshelelayo, uma umthamo owamukelayo ngeke neze umxhwele. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi ukwenyuka kwezinga le ipharamitha, le compressor kuyodingeka bagcwalise esikhaleni okwesikhathi eside.
Uma ucabanga ngombuzo ka lokho compressor likhethelwe egalaji, kufanele kuphawulwe ukuthi ukusetshenziswa emoyeni ithuluzi kungaba kwenziwe nombala, kuleso simo ungenza kancane ivolumu umamukeli. Uma umoya ungena portionwise engcono uncamela compressor nge ngokwanele umxhwele ngoba umamukeli ivolumu.
Njengoba isibonelo imishini lapho ivolumu owamukelayo sika 500 amalitha, angabhekwa compressor (220) ye-brand ABAC GENESISE 2208-500, okuyinto kuyodingeka bakhokhe ama-ruble ayizigidi 676. Le divayisi kufanelekile emagalaji ukuthi efanele wahlanganyela ngilungisa izimoto. imishini engabizi -. FUBAG SERVICE MASTER Kit, ukubaluleka okuyinto 8900 RUB has ithangi ephethe umthamo we 6 amalitha. Kulokhu, ingcindezi yokusebenza 8 ibha, futhi umkhiqizo kuyinto 180 l / imiz. Kulesi imodeli, akukho amasondo ezokuthutha, kodwa kukhona nezinye izici eziningi ezinhle, phakathi kwabo kufanele ezigqanyisiwe:
Isilinganiselwa compressors abakhiqizi
Uma ufuna ukuthenga compressor engabizi is brand owaziwa, kufanele sinake imodeli FUBAG Ukugunda EMOYENI OL 195, obiza ruble 6.300. Lokhu imishini kulula ukusebenza futhi yakhelwe ukusebenza endlini kanye nokugcinwa izimoto. Isisindo kanye Ubukhulu zedivayisi ezincane, okuyinto ekahle kakhulu izinto zokuhamba. Lokhu compressor coaxial ngomzuzu owodwa okwaziyo ukukhulula 180 amalitha emoyeni. Operating kontanga 8 ibha, futhi iyunithi ukala 7 kg. It is powered by amapayipi voltage 220 V, amandla 1.1 kW.
Lapho ukhetha compressor emoyeni ngoba igalaji, kufanele sinake komunye umakhi ethandwa - kuyinto "The Patriot", okwenza EURO imishini brand 50/260, kuzobiza ruble 8600. Lokhu apharathasi ingasetshenziswa usebenze amathuluzi ahlukahlukene womoya. Ukukhiqiza Kuthi emikhulu futhi 260 l / imiz, kodwa ivolumu umamukeli 50 l. Amandla kwaba 1.8 kW, it has indandatho ezokuthutha, nesisindo 27 kg.
Uma ucabangela isilinganiso ka compressors okwesikhathi igalaji, kufanele bajwayelane imodeli SAT 4 / C-100.J2047. B kusukela Remeza inkampani, intengo imishini ruble 21.800. Le divayisi has a ukusebenza kunalokho umxhwele, okuyinto 400 l / imiz, futhi umthamo omkhulu owamukelayo, kuba elilingana 100 amalitha. Amandla kuyinto 2.2 kW, idivayisi has amasondo ezokuthutha, kodwa ukucindezela lokusebenza 8 ibha.
Izincomo on ezimele yokukhiqiza compressor
compressor Homemade okwesikhathi igalaji, isithombe okuyinto kuyoba usizo cabanga ngaphambi kokuqala umsebenzi, ishibhile, kodwa esitolo kusadingeka. "Biryusa" imishini ukuba lathathwa cooler injini. Udinga umamukeli Fum eteyipini, kufaneleka, ingcindezi gauge, ingcindezi inkinobho, i-adaptha, pyatihodovoy umphini ngoba futha. Zonke izici nempumalanga kuhlangane, ekugcineni bakwazi ukuthola ingcindezi 3.5 ibha. Ngemva Welding, uzimele kufanele ngaphezu kwalokho ukuthenga dehumidifier kanye reducer.
Primus - i izivakashi engumngane esisemqoka!
Hlunga kahle indle
Indlela ukukhetha sokuprakthiza for metal
Modern ukwahlukanisa izinto: izinhlobo kanye izakhiwo (bheka ithebula), isicelo
Indlela "ukuzwa iphunga" noma "uzizwe"? Ezinye ubuqili isiRashiya
Bangaki abantu emhlabeni? izwe eMhlabeni emaningi
"Scherbetli" (ugwayi): incazelo
Phuket, Patong. Amahhotela Map Phuket (Patong)
Indlela ukupheka Burgers zakudala nengulube inkukhu?
Indlela ukunciphisa umzimba ngosizo namalahle isebenze?